Kufsi ay Askarta AMISOM u geesteen Haween doonanayay kaalmo caafimaad - Warbixin | Keydmedia
Kufsi ay Askarta AMISOM u geesteen Haween doonanayay kaalmo caafimaad - Warbixin
Muqdisho (KON) - Ciidamada AMISOM ayaa duruufaha xagga bani’aadamnimada iyo caawinaadda ah ee ay u sameeyaan dadka dan-yarta ah ay uga faa’iideystaan sidii ay galmo ula sameyn lahaayeen Haween Soomaaliyeed, sidaas waxaa lagu sheegay Warbixin ay soo saartay Hay'adda Human Rights Watch.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa Warbixintan 71 bog ka kooban ku sheegtay in Askar ka tirsan Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee (AMISOM) ay xeryahooda Muqdisho ku yaal tacaddi galmo ugu geysteen oo si xun uga faa’iidaystay haween iyo gabdho Soomaali ah oo aad u nugul.
Warbixintaan oo Ciwaankeedu yahay 'Xoogga ay Raggaan Nagu Haystaan' ayaa lagu Qoray in Ciidamada AMISOM ay Gabdho Soomaaliyeed ku kufsadeen labada saldhig ee AMISOM ku leeyihiin Muqdisho, kuwaasoo ay ku jiraan ciidammo ka kala socda dalalka Uganda iyo Burundi.
“Qaar ka tirsan askarta Midowga Afrika ayaa si khaldan u isticmaalay awoodooda si ay si xun uga faa’iidaystaan haweenka iyo gabdhaha Soomaalida ah ee aadka u nugul,” sidaasi waxaa sheegtay Liesl Gerntholtz, oo ah agaasimaha waaxda xuquuqda haweenka ee Human Rights Watch. “Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo adag, balse hogaanka Soomaaliya iyo Midowga Afrika way dhameyn karaan si xun uga faa’iidaysiga iyo tacaddiyada galmo haddii ay ku khasbaan wadammada ciidamada geeya Soomaaliya inay gaboodfalayaasha wax ka qabtaan.”
"Wadammada Ciidamada Geeya Soomaaliya iyo Deeq Bixiyayaashu Waa Inay Horumariyaan Caddaalad ay Helaan Dhibanayaasha, waana in ay la xisaabtamaan Ciidamada ka jooga Soomaaliya oo ku xudgudbay Xuquuqda Bini'aadamka" Ayaa lagu Qoray Warbixinta.
Warbixintan ayaa lagu wareysay 21 Habeen iyo Gabdho, waxeyna Hay'adda HRW sheegtay in Ciidamadaan ay kufsadeen ama ay tacaddi galmo ugu geysteen xeryaha AMISOM haween doonanayay kaalmo caafimaad ama biyo.
Halkaan ka Akhriso Warbixinta HRW oo ku Qoran Af-Soomaali
Midowga Afrika iyo AMISOM waa inay xoojiyaan habdhaqan ah “inaan loo dulqaadanayn” hawlaha sharci darrada ah ee ka dhaca xeryahooda, Human Rights Watch ayaa sidaa sheegtay. Waa inay dhisaan ama xoojiyaan nidaamyo iyo waaxo u xil saaran sidii tacaddiyadan wax looga qaban lahaa, sida inay anshax suubis sameeyaan, iyo inay sameeyaan waax heer Midowga Afrika ah oo madax bannaan oo baaritaanada sameysa.
Human Rights Watch waxa ay cilmi baaris ka sameysay gudaha Soomaaliya, Yugaandha iyo Burundi. Dhammaan haweenka iyo gabdhaha la wareystay ayaa ka tirsan bulshada barakacayaasha ah ee ka kala yimid koofurta iyo bartamaha Soomaaliya. Intaa waxaa dheer, in Human Rights Watch ay wareysatay in ka badan 30 markhaatiyaal ah, kormeerayaal ajanabi ah, shaqaalaha militariga iyo mas’uuliyiin ka socda wadamada ciidamada geeya Soomaaliya. War bixinta ayaa diiradda saartay dhacdooyinki ka dhacay Muqdisho oo ay ku sugan yihiin askarta reer Yugaandha iyo Burundi, tani micnaheedu ma’aha in tacaddiyadan kuwa la mid ah aanay ka dhici karin meelo kale.
Haweenka iyo gabdhaha caawinaada u raadsada xeryaha AMISOM ee Muqdisho ku yaal ayaa sidaa sameeya iyagoo halis weyn ku jira, Human Rights Watch ayaa sidaa ogaatay. Tusaale ahaan, Qamar R. (ma aha magaceeda saxda ah) oo 15 sano jir ah ayaa aaday xerada guutada Burundi si ay daawo ugu soo hesho hooyadeed oo xanuunsanayd. Tarjumaan Soomaali ah ayaa u sheegay inay raacdo labo askari oo reer Burundi ah si ay daawo u soo hesho. Waxay geeyeen meel cidla ah. ‘Marki hore xijaabka ayuu iga bixiyay markaas ayuu isoo weeraray.’, Sidaa ayay u sheegtay Human Rights Watch. Markii ay sii baxeysay, askarigi kale ayaa siiyay 10 doolar.
Caddeymaha la helay ayaa muujinaya in ka faa’iidaysiga galmada aanay xeryaha AMISOM ee Muqdisho qarsoodi ka ahayn. Human Rights Watch ayaa sidaa sheegtay. Haweenka iyo gabdhaha ayaa xeryaha ka galayay albaabada rasmiga ah ee aadka loo ilaaliyo oo waliba waxay tagayeen goobo kale oo sida la sheegayo ah goobo aan la tagin oo aad loo ilaaliyo. Labo haween ah ayaa Human Rights Watch u sheegay in askarta ay lacagta kula seexdeen ay siiyeen aqoonsiyo rasmi ah si ay ugu sahlanaato inay soo galaan xerada.
Ma ahan markii ugu horeysay oo Ciidamada AMISOM lagu eedeynayo Kufsi.